Gloria Guevara waxay u dagaallameysaa hoggaanka furitaanka safarka WTTC Style
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dalxiiska » Gloria Guevara waxay u dagaallameysaa hoggaanka furitaanka safarka WTTC Style
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wareysiyo • Investments • News • Dadka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Gloria Guevara, WTTC Madaxweynaha & Maamulaha guud
Intii lagu guda jiray kulanka xasaasiga ah, Gloria Guevara, WTTC President & CEO, ayaa tiri: “Waxaan haynaa hal codsi oo keliya: waxaan u baahanahay inaan aragno soo celinta dhaqdhaqaaqa caalamiga. Waxaan ubaahanahay sharciyo cad oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa. Yurub waa inay qeexdaa borotokoolka, markaa way cadahay sida dhaqdhaqaaqa si nabadgelyo leh dib loogu bilaabi karo gudaha EU, EU iyo EU.
174 milyan oo shaqo ayaa ku lumay safarka adduunka iyo warshadaha dalxiiska
. Immisa shaqooyin ayaa la soo celin karaa, sida iyo goorma
Tallaalka iyo hoggaanka waddamada dib u furaya xuduudaha ayaa ka mid ah furayaasha WTTC ay riixeyso.
Waa inaan bedelnaa karantiillo aan waxtar lahayn oo aan uga guurno qiimeyn ku saleysan dalka una gudubno qiimeyn ku saleysan shaqsiyeed. Dadka oo dhami ma qabaan cudurka, waana inaannaan u daaweyn iyaga sidii oo kale.
Kani waa rafcaanka ay sameysay Gloria Guevara, madaxa Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka shirkii Wasiirada Dalxiiska ee Midowga Yurub ee bishan. Waxay rabtaa hoggaan ka socda Midowga Yurub si loo badbaadiyo waaxda Safarka & Dalxiiska oo burburka ku habsaday COVID-19 oo safmar ah.
Wareysi uu siiyay ITB Now Daily, Maamulaha guud ee WTTC wuxuu yiri:
Aad baan u rajo fiicanahay. Haddii aad aniga i weydiisay su’aashaas dhawr bilood ka hor, jawaabta ayaa ka duwanaan lahayd. Sababta ayaa ah in sanadkii hore uu ahaa mid aan horay loo arag. Waxaan qiyaaseynaa 174 milyan oo shaqooyin ah inay saameyn ku yeesheen adduunka. Markaan idhaahdo saamayn, waa dad isku dhaf ah oo la sii daayay ama la eryay ama laga dhigay siyaado. Waxaan isku daynay inaan qiyaasno inta shaqooyin aan soo celin karno sanadkaan, waana inta udhaxeysa 88 ilaa 111 milyan, oo celcelis ahaan 100 ah, laakiin waxaan dhihi jirnay shuruudaha qaarkood inay ubaahanyihiin inay jiraan.
Maaddaama aan aragno tallaalka gardarrada ah ee tallaallada meelo kala duwan oo adduunka ah, waxaan aaminsanahay inay qayb weyn ka tahay xalka, laakiin maahan xalka keliya.
Ku sii wado aqrinta bogga 2 (dhagsii hoose)